20 Fanolorana Vavaka Famelomana ho amin'ny fiarovana ny fanambadiana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 20 Fanolorana Vavaka ho an'ny fanafahana amin'ny fiarovana ny fanambadiana
10 Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; tonga aho mba hananany fiainana, ary hananany be dia be tokoa izy.
Ny tanjon'ny devoly voalohany dia ny hangalatra ny fahasambarana ao aminao fanambadiana. Fantany fa raha afaka manao izany handringana ny fanambadianao, azonao atao ny mampindrana trosa, ny hoavin'ny vadinao sy ny zanakao. Ny fanambadiana vaky no asan'ny devoly. Androany isika dia hijery teboka am-bavaka 20 momba ny fiarovana ny fanambadiana. Tsy maintsy mitsangana ianao ary miaro amin'ny fanambadianao avy hery manohitra ny fanambadiana. Ity teboka vavaka amin'ny fanafahana ity dia hanampy anao rehefa mivavaka ny devoly amin'ny fiainanao sy ny fanambadiana ianao. Ny vavaka no fanalahidin'ny fahalalahana amin'ny ady rehetra ataon'ny demonia. Tsy maintsy mivavaka ianao handresy ny devoly, ny vava mihidy dia laharana mihidy, raha toa ianao ka milefitra ny devoly ao amin'ny fanambadianao, dia voafatotry ny lozam-panambadiana ianao, fa rehefa mifoha vavaka sy rebinao ireo demonia manelingelina ny fanambadianao , ho hitanao ny fahafahana eo no eo amin'ny fanambadiana.
Andriamanitra tsara dia Andriamanitsika, sitrapony ny hankafizantsika ny fanambadianay, Andriamanitra tsy namorona fanambadiana ho feno krizy, koa rehefa mandray izany foto-bavaka fanafahana ho fiarovana ny fanambadiana ianao izao dia hitako fa manafaka ny tokantranonao amin'ny tananao ny Andriamanitra ny devoly sy ny demoniany amin'ny anaran'i Jesosy. Ento am-bavaka ity vavaka ity finoana avelao ny Tompo hanasitrana ny mariazinao anio. Manantena fahagagana eo amin'ny tokantranonao rehefa mivavaka io anarana io amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
1. Ray ô, avelao hatsangana amin'ny fanjakako ny fanjakanao rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Amin'ny ran'i Jesosy, manafaka ny tenako amin'ny fifanarahana ara-panahy ratsy rehetra nataoko tamina fahatsiarovan-tena na tsy fahatsiarovan-tena tamin'ny anaran'i Jesosy aho.
3. Avelao ny fanahy rehetra amin'ny fanimbana mpivady hanafaka ahy ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy
4. Raiko, amin'ny ran'ny Jesosy Kristy Zanakao no anafahako ny tenako amin'ny sekolin'ny trano vaky, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Miverina any amin'ny mpandefa aho, miaraka amin'ny zana-tsipika rehetra amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Izaho dia manambara tsy maninona ary tsy manafoana ny drafitra rehetra an'ny satana hanoherana ny tranoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Aoka ho fongana tanteraka ny fitaovam-piadiana ratsy rehetra nofinidin'ny fahavalo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Aoka ny ozona rehetra navoaka hamelezana ny tranoko ho nofoanana ary hosoloana fitahiana, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Avelao ho tapaka sy hotapatapahina ho an'ny anaran'i Jesosy ny fifanarahana ratsy rehetra.
10. Aoka ny herin'ny faharatsiana ao an-tranoko hamongatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Avelao ho triatra ny tokotanin'ny fahavalo rehetra amin'ny tranoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Aoka ny tsy fitenenana ratsy rehetra holazaina hanoherana ny tranoko tsy hohatonina amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Aoka ny fombam-panambadiana ara-panahy haniraka ahy hamatotra, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Ny peratra sy ny akanjo fampakaram-bady ratsy rehetra dia hodorana lavenona amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Manafaka ny tokantranoko avy amin'ny tanan'ny mpivadika trano sy mpivady mpihaza amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Mandidy ny mpanolotsaina rehetra sy mpanentana ara-panahy aho hamaha ny fomban'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Aoka ny Andrianan'ny fiadanana hanjaka amin'ny tokantranoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Avelao ny mpiasam-panjakan'i satana rehetra hanakarama ny fanambadiako araka ny baikon'i Bala, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Avelao ho tonga ao an-tranoko, amin'ny anaran'i Jesosy ny hosotra mba hiroborobo amin'ny fiainam-bady.
20. Avelao ny Fanahy Masina hanova ny fanambadiako ho lanitra eto an-tany, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, misaotra anao nihaino sy namaly ny anaran'i Jesosy aho.
Previous lahatsoratraVavaky ny ady ho an'ny fifamaliana
Next lahatsoratraVavaka fanafahana ho fiarovana ny zanatsika
Hevitra vavaka mahery vaika hamelomana indray ny anjara maty
Famakiana Baiboly isan'andro anio 18 Oktobra 2018
Vavaka Famerenana amin'ny maty
Janoary 24, 2019